musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Germany Kuputsa Nhau » Lufthansa inochengetedza kumwe kushomeka pamusika mukuru
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Nekuiswa kwechisungo chekupedzisira chemakambani muna Kukadzi 2021, Lufthansa Boka rakatochengetedza kubhadharazve mari yezvikwereti zvese zvemari zvakafanira muna 2021 uye zvakare vakabhadhara chikwereti cheKfW chemamirioni 1 bhiriyoni pamberi pechirongwa.
Chechipiri bond bond yemabhiriyoni euros yakaburitswa muna 1.
Kuiswa pamwe nekukura kwemaviri emakore masere nemasere kunozadzisa chimiro chekukura cheLufthansa Group.
Mari yenguva refu yakakwenenzverwa ichashandiswa kuwedzera kusimbisa kubatika kweLufthansa Group.
Deutsche Lufthansa AG yakabudirira zvakare kuburitsa chisungo nehoriyamu yakazara ye1 bhiriyoni euros. Chisungo chine dhinomendi remazana zana emamiriyoni euros chakaiswa muzvikamu zviviri zvine makore matatu nemakore masere zvichiteerana uye huwandu hwemamiriyoni mazana mashanu ema euro imwe neimwe: Chidimbu chine izwi kusvika muna 100,000 chinobata chikamu pa500 muzana pagore, chikamu chiri kukura 2024 2.0 muzana.
Nekuiswa kwechisungo chekupedzisira chemakambani muna Kukadzi 2021, iro Boka rakatochengetedza mari yezvese zvikwereti zvemari zvakafanira muna 2021 uye zvakare vakabhadhara chikwereti cheKfW chemamirioni 1 bhiriyoni pamberi pechirongwa. Mari yenguva refu ikozvino yaunganidzwa ichashandiswa kuwedzera kusimbisa iyo Lufthansa BokaKubatika.
“Kudzokororwa kwakabudirira kwechisungo chemubatanidzwa zvakare kunosimbisa kugona kwedu kune akasiyana ekushandisa ekushandisa mari. Matanho maviri anopfuura matatu uye masere emakore anokwana zvakakwana muhukuru hwedu. Uye zvakare, isu tinogona kuwana mari pamusika wemari pane zvakanakira mazwi tichienzaniswa nematanho ekusimudzira. Tiri kuenderera mberi nekushanda zvine mutsindo pamaitiro edu ekugadzirisa zvinhu kuitira kuti tikwanise kudzorera matanho ekusimudzira hurumende nekukasira, ”akadaro Remco Steenbergen, Chief Financial Officer weDeutsche Lufthansa AG.
Kubva munaKurume 31, iro Boka raive nemari nemari zvakaenzana ne10.6 bhiriyoni euros (kusanganisira mari isina kufambiswa kubva mumapakeji ekusimudzira kuGerman, Switzerland, Austria neBelgium). Panguva iyoyo, Lufthansa yakange yashandisa dzakatenderedza 2.5 mamirioni emadhora e9 mabhiriyoni euros kudzikamisa mapakeji.
Pamusoro pechisungo chanhasi chemabond, iyo Lufthansa Group iri kuenderera mberi nekuita gadziriro yekuwedzera mari. Mari yemubhadharo yaizobatsira zvakanyanya pakubhadhara matanho ekudzikamisa eGerman Economic Stabilization Fund (ESF) uye nekudzoreredza kweyakagadziriswa capital inogara kwenguva refu. Iwo Executive uye Supervisory Boards haasati atora danho pamusoro pehukuru uye nguva yekukwanisa kuwedzera mari. Uye zvakare, kubvumidzwa neESF kweizvi kunofanirwa kuwanikwa.